Dhageyso:Dhuuxa Wareysiyada Alfurqaan. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On Apr 17, 2016 171 1
dhuuxaDhuuxa Waa Barnaamij Mug weyn oo lagu faaqido arimaha siyaasada Soomaaliya iyo dhacdooyinka Maalinlaha ee dhacaya.
Dhageyso Dhuuxa wareysiyada 17 04 2016.lite
Khasaare Culus Oo ka dhashey Camaliyad Nafhurnimo Oo ka dhacday Afaafka Madaxtooyada.
Ciidanka Itoobiya oo Hub Laga Furtay. (Warbixin)
Abuu muslim al-qubaawi says 5 years ago
Kadib markaan dhageystay maanta dhuuxa wareesiga oo runtii lagu faaqiday dhibka Itoobia ku haayso somalia, waxaan soo jeedinayaa Sida ugu wanaagsan ee loola dhaqmikaro itobianka soo dagayo wadanka waa in la ugaarsado shakhsiyan sababtoo ah hadii askartoodii ay laaynaan dadkii somaliyeed oo dhulkooda jooga,waxaa waajib ah in la, ugaarsado dadkooda oo guryaha loogu dhaco habeenkii kadibna banaanka magaalada lagu toogto, waa sida ugu wanaagsan.
Waad ogaan doontaan way kayaacayaan markii ay bilaabato in ay isweydiiyaan war hebel yaa ka xeeystay? ma,ogi-markaa waxay qixidoonaan iyagoon ladhihin nagataga waa hubaal taas.waa in iyaga istabaan marka hore
marka laga reebo waxii ashahaato sidaas oo kali ah ayaana looga hortagikaraa ee maxaa kudhacay XSHM oo loo ugaarsa la,yahay itoobiyaanka dagay puntland iyo somaliland.hadii ay nadileen waa in aan dilnaa al-jizaa,u jizaa-abuu muslim
Axmad	 Sep 25, 2021 0
Khasaare Culus Oo ka dhashey Camaliyad Nafhurnimo Oo ka dhacday…
Askari Faransiis ah Oo lagu dilay dalka Maali.